Gary Neville Oo Ku Booriyay United Inay Iska Iibiyaan 4 Xiddig Soona Iibsadaan Harry Kane – Garsoore Sports
Gary Neville Oo…
Gary Neville ayaa ku booriyay Manchester United inay lasoo saxiixato Harry Kane kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga wuxuuna aaminsan yahay in Anthony Martial, Daniel James iyo Jesse Lingard la iibiyo si ay lacag ugu helaan u dhaqaaqista weeraryahanka Tottenham.
United ayaa si weyn u xoojisay kooxdeeda xagaagan markii ay la soo saxiixatay Jadon Sancho oo ka yimid Borussia Dortmund iyo Raphael Varane oo ka yimid Real Madrid.
Dhanka kale Kane ayaa doonaya in uu dhamaystiro ku biirista kooxda Man city kahor inta uuna suuqu xirmin. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha Tottenham Daniel Levy ayaa la fahamsan yahay inuu damacsan yahay inuu sii haysto weeraryahanka xitaa haddii dalab £150 milyan ah la helo toddobaadkan.
Laakiin Neville ayaa ugu baaqay United inay tijaabiso go’aanka Tottenham ee Kane maadaama uu rumeysan yahay in kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay weli ku gaaban tahay tartanka horyaalka Premier League oo aan lahayn weeraryahan hoggaamiya.
Mar la weydiiyay haddii uu dareensan yahay in imaanshaha Sancho iyo Varane ay ku filnaan doonto United inay ku guuleysato horyaalka, Neville ayaa ku yiri Sky Sports: “Dareenkeygu waa maya – kuma yeelan doonaan saameyn isku mid ah Manchester United sida Van Dijk iyo Alisson ay ugu yeesheen[ Liverpool] si ay u helaan 90-95 dhibcood waxay u baahan doonaan inay ku guuleystaan horyaalka. Waxaan qabaa inay weli gaagaaban yihiin.
‘Chelsea waan aragnay waxa ay ku sameeyeen [Romelu] Lukaku, waxaan aragnay in Van Dijk uu ku soo laabtay Liverpool, waxaan ognahay in Manchester City ay ku maskaxada ku heysan inay isla cayaarsiiso [Jack] Grealish (oo dhowaan yimi) iyo Harry Kane. Haddii ay helaan Kane waxaan u maleynayaa inay dhibaato weyn ku tahay United.
‘Waa maxay sababta ay u heystaan Martial, James, Lingard…
‘Maxay ugu dhaqaaqi la’yihiin Harry Kane toddobaadkan?
‘Sababtoo ah haddii aan u malaynayo in Harry Kane uu kusoo biirayo Manchester United waxay heli karaan 90-95 dhibcood, la’aantiis [ma sameen karaan].
‘Waxaan u malaynayaa in Manchester United ay u baahan doonto weeraryahan dhexe 12 -ka bilood ee soo socda, ninka hadda waa la heli karaa haddii aad bixiso £ 150m.
‘Waxaad haysataa Martial, James, Mata iyo Lingard kuwaas oo aan u malaynayo, inay runtii aan ka maaranno.
‘Aniga shaqsi ahaan waxaan u malaynayaa in Kane oo imaada [United] uu noqon doono farqi-sameeye.’